Lega Serie A oo wadda qorshe Boxing Day lagu ciyaarayo horyaalka Talyaaniga! – Gool FM
Lega Serie A oo wadda qorshe Boxing Day lagu ciyaarayo horyaalka Talyaaniga!
(Milano) 13 Jan 2017 – Wixii loo gaaro fasal-ciyaareedka xiga, haddii aysan wax is bedelin, waxaa lagu wadaa in horyaalka Talyaanigu uu bilaabo ciyaarista maalinta loogu yeero Boxing Day ee daba yaaqada Diseembar.
Dhamaadka bisha soo aaddan ee Febraayo ayuu guddiga fulinta ee Lega Serie A wuxuu ka shiri doonaa taariikhaha la dheeli doono horyaalka Talyaaniga dufcadda 2017-2018, iyadoo bisha Abril lagu wado inay naadiyadu ogolaadaan inay ugu yaraan ciyaaraan hal kulan oo ku beegan dabayaaqada Diseembar iyo bilowga sanadka cusub.
Arrintan ayaa waxaa sharraxaad ka bixiyay guddoonka Lega Serie A oo ah Maurizio Beretta, iyadoo sidoo kale laga doodi doono in kulamada Serie A qaarkood dibedda lagusoo dheelo.
''Roberto Gagliardini diyaar buu u yahay inuu berri safto waana laacib muhim ah'' - Pioli
Tartankii kubadda cagta 12 jirada degmada Wadajir oo la soo gaba gabeeyay+SAWIRRO